उपत्यकाका १३६ ठाउँमा भेटिए काेराेना संक्रमित – NepalajaMedia
August 8, 2020 259
काठमाडौँ, २३ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा एउटै परिवारका सात जनासहित १ सय २४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले उपत्यकामा शुक्रबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ । ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमकुमार कोइरालाका अनुसार पुष्टि भएकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यका बाहिरबाट आएका छन् । ‘त्यसमा पनि प्रदेश २ बाट आएकाको संख्या बढी छ । भारतबाट आएका पाँच जना छन्,’ कोइरालाले भने ।
शय्या अभावका कारण शुक्रबार पनि संक्रमितमध्ये २५ जनालाई मात्र अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाइएको छ । ६८ जना घरकै आइसोलेसनमा बसेका छन् । केही सम्पर्कविहीन र उपत्यकाबाहिर छन् । ‘रोगको उपचार गर्न अस्पताल भर्ना भएका केहीलाई त्यहीं बस्न भनेका छौं,’ कोइरालाले भने ।
शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ३४ जना महिला छन् । उपत्यकाको एक परिवारमा सात जनालाई संक्रमण भएको छ भने अर्को एक परिवारमा दुई जना संक्रमित भएका छन् । लकडाउन हटेयता लक्षणसहितको संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ । उपत्यकामा शुक्रबार लक्षणसहितका संक्रमित ३० जना पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म उपत्यकामा ९ सय ८२ जनामा कोरोना देखिएको छ । तीमध्ये काठमाडौंमा ७ सय ६६, भक्तपुरमा ८२ र ललितपुरमा १ सय ३४ जना छन् । ६ सय ४६ जना सक्रिय संक्रमित हुन् । मन्त्रालयले काठमाडौंसहित ६ जिल्लालाई जोखिममा राखेको छ । साउन १ देखि १२ सम्म उपत्यकामा दिनहुँ १६ जनाभन्दा कम संक्रमित थपिएका थिए ।
साउन १३ मा एकै दिन ६१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दिनमा ५० जनाभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेपछि आइसोलेसनमा राख्ने शय्याको अभाव हुन थालेको छ । ईडीसीडीको संक्रमित व्यवस्थापन गर्ने टोलीले घरमै आइसोलेसनमा बस्न चाहनेलाई अनुमति दिने गरेको छ । उनीहरूलाई स्थानीय तहका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशलाई निगरानी नगरिएको गुनासो छ । बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका १ सय २ जनामध्ये २० जना घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए । बिहीबार पनि ८१ जना संक्रमित देखिएकामा ४० जना प्रहरी र तिनका आफन्त प्रहरी अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ । अरू घरमै छन् ।
संक्रमित भर्ना गर्न तोकिएको अस्पतालको शय्या खाली नभएपछि कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पताललाई दुई सय शय्यामा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । तर ती प्रयोगमा आइसकेका छैनन् । त्यस्तै, छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल र महाराजगन्जको प्रहरी अस्पताललाई पनि लेबल २ को अस्पताल बनाउने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको अधिकारीले जानकारी दिए । तर सेनाले सैनिकलाई मात्रै र प्रहरीले आफ्नो संगठनभित्रका संक्रमित मात्र भर्ना गर्ने भनेका छन् । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
Prev१९१ यात्रु बोकेको एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमान दुर्घटना
Nextयसकारण युवाहरु झन् बढी संक्रमित हुँदै
मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नी यति राम्ररी श्रीमति र बच्चालाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी !
बच्चा फालेको आरोप लागेकी आमा पहिलोपटक मिडियामा
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भए ४५ र नभएको भए ३० मिनेटमै रिपोर्ट
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25328)
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (15907)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12300)
आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. (10269)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (8996)
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ? (8744)
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (8123)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (7946)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7036)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6780)
सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी हुन्छन यी ४ राशि
कोरोना संक्रमणमा नेपालमा आज नयाँ रेकर्ड, बज्यो खतराको घन्टी
कोरोना बाट आज नेपालमा ३७ को मृत्यु, यो संगै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गरे यस्तो घोषणा